Yangu iPhone Kubata Screen Haisi Kushanda! Heino Kugadzirisa. - Iphone
ndotora sei ma podcast ku iphone yangu
verizon inotakura inovandudza iphone 5
maitiro ekumisa maapplication kubva kubondera
Yangu iPhone Kubata Screen Haisi Kushanda! Heino Kugadzirisa.
Zviri zvakasikwa kuti unzwe kushungurudzika kana yako iPhone yekubata skrini isiri kushanda. Iwe unoshandisa yako iPhone kune zvese, kubva mukufona kuenda kupururudza kuburikidza nemifananidzo - asi usarega ako 'ekubata screen matambudziko' kukukanda iwe pasi. Muchinyorwa chino, ini ndichatsanangura nei iyo yekubata skrini pane yako iPhone isiri kushanda , kugadzirisa matambudziko ayo unokwanisa gadziriswa pamba, uye kurudzira dzimwe sarudzo huru dzekugadzirisa, kana zvasvika pane izvo.
Pane zvikonzero zvakawanda nei yako iPhone inobata skrini inogona kumira kushanda. Nekutenda, kune zvekare nzira dzakawanda dzekugadzirisa iwo matambudziko.
Nei yangu iPhone Kubata Screen Isiri Kupindura?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuziva sei yako iPhone inobata skrini. Kazhinji, dambudziko rinokonzerwa kana chikamu chemuviri chekuratidzwa kwe iPhone yako chinoita kubata (inonzi iyo digitizer ) inomira kushanda nemazvo kana kana software yako ye iPhone yamira 'kutaura' kune Hardware nenzira yainofanira kuita. Mune mamwe mazwi, inogona kunge iri hardware kana dambudziko re software, uye ini ndichakubatsira nezvose zviri muchinyorwa chino.
Troubleshooting iPhone software matambudziko kazhinji haibhadhare chero chinhu. Zvakare zvakareruka pane kubvarura skrini rako nemakapu ekudhonza (ndapota usaite izvi). Neichi chikonzero, isu tichatanga nekugadzirisa kwesoftware uye toenderera mberi kugadzirisa matambudziko epanyama kana uchifanira.
Tsamba nezve madonhwe uye kudeuka: Kana iwe uchangobva kudonhedza yako iPhone, mikana idambudziko rehardware ndeyekupomera yako yekubata sikirini dambudziko - asi kwete nguva dzose. Zvinononoka maapplication uye matambudziko anouya nekuenda anowanzo kukonzerwa nematambudziko esoftware.
Chinhu chekupedzisira kuchengeta mupfungwa ndechekuti dziviriro yescreen inogona kukonzera kubatwa kwechidzitiro nenyaya yako iPhone. Edza kubvisa yako iPhone's screen protector kana iwe uchinge uine matambudziko neinobata skrini.
tsamba dzekuregerera murume wangu
Kana yako yekubata skrini ichishanda dzimwe nguva , ramba uchiverenga. Kana ikasashanda zvachose, ramba uchienda kuchikamu chiri pazasi chinonzi Kana Yako IPhone Isinga Pindure Kuti Ubate Kwazvo .
Izwi Rinokurumidza Pane iPhone Kubata Zvirwere
iPhone inobata chirwere inoreva kune akateedzana ematambudziko ayo anonyanya kukanganisa iyo iPhone 6 Plus. Aya matambudziko anosanganisira grey, inopenya bar kumusoro kwechiratidziro uye nenyaya nezviratidzo zve iPhone, senge pini-ku-zoom uye Reachability.
Pane imwe nharo pamusoro pezvinokonzera iPhone kubata chirwere. Apple inoti imhedzisiro ye 'kudonhedzwa kakawanda pane yakaoma nzvimbo uye nekuzounza kumwe kunetsekana pachigadzirwa.' Vanoziva nezve dambudziko uye vane chaiyo yekugadzirisa chirongwa kana uri kusangana nenyaya iyi ne iPhone yako. iFixI yakavhura iyo iPhone 6 Plus uye ndokuwana yavanoti a “Dhizaini yekugadzira.”
Kunyangwe chii chiri kunyatso kukonzera dambudziko, unogona kutora yako iPhone muApple uye zviite kuti zvigadziriswe pamubhadharo we $ 149 webasa .
Software Matambudziko uye Yako iPhone Kubata Screen
Dambudziko nesoftware inotaurira foni yako maitiro ekuita inogona kukonzera yako iPhone kubata sikirini kuti isiye kushanda. Zvinogona kubatsira kumisikidza zvinonetsa software kana yako iPhone yekubata skrini isiri kushanda.
kuviga sei nhamba yangu yefoni iphone
Yako yekubata skrini inomira kupindura kana iwe uchishandisa imwe app? Iyo app inogona kunge iri yekukanganisa. Edza kusunungura uye kuisazve. Kubvisa app:
Tsvaga iyo app pane yako iPhone's Kumba screen . Chidzitiro cheKumba ndicho chaunoona pazasi mu screenshot iripazasi.
Tinya Delete App .
Tinya Delete .
Kana yako iPhone yekubata chidzitiro isiri kushanda mushure mekunge waisa zvakare iyo app, tumira meseji kune wemugadziri weapp. Vangave vaine gadziriso yedambudziko kana kuti vari kushanda pane mhinduro kare.
Ndingaite Sei Kuti Nditumire Meseji kune Anogadzira App?
Tinya kuvhura iyo App Store .
Tinya Tsvaga pasi pechidzitiro uye tsvaga iyo app.
Tinya iyo app icon kuvhura ruzivo nezve iyo app.
Mupumburu kusvika pasi uye vawane Webhusaiti Yekuvandudza . Webhusaiti yemusimudziri inotakura.
Tarisa fomu rekutaurirana kana email kero pawebhusaiti yemusimudziri. Hazvifanirwe kunge zvakaoma kuzviwana iye mushambadzi akakosha munyu wavo. Rangarira kuti vagadziri vakanaka vanozvikoshesa kana iwe uchivaudza ivo nezvematambudziko nemaapps avo!
Izvo hazviwanzo, asi pano neapo iPhone software inogadziridza inogona kukonzera kubata skrini nyaya. Nyaya yazvino yakanyorwa yezvino kuitika yaive yeApple iOS 11.3 yekuvandudza. Dambudziko rakakurumidza kugadziriswa neakatevera Apple yekuvandudza.
maitiro ekubhadhara matikiti emigwagwa muNew york
Vhura Zvirongwa uye tapira General -> Software Kwidziridza . Tinya Dhawunirodha uye Isa kana iOS yekuvandudza iripo pane yako iPhone.
Kana Yako IPhone Isinga Pindure Kuti Ubate Kwazvo
Bata matambudziko echiratidziro anoitika mune akawanda maficha kana kana iwe usina app yakavhurwa inogona kukonzerwa nematambudziko neiyo iPhone's software. Nhanho yakanaka yekutanga yekugadzirisa matambudziko ndeyekugonesa yako iPhone kudzima uye kudzokerazve, asi zvakaoma kuzviita kana yako yekubata skrini isingashande! Pane kudaro, isu tichafanirwa kuita a zvakaoma reset . Heano maitiro:
Kana yako iPhone ikasadzima munzira yakajairwa - kana kudzima iPhone yako nekudzokerazve isingagadzirise dambudziko - edza kuita yakaoma reset. Kuti uite izvi, bata maBhatani eMagetsi neKumba pasi panguva imwe. Mirira masekondi akati wandei, kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri, wobva warega.
Pane iyo iPhone 7 kana 7 Plus, kuomesa kwakaomarara kunoitwa nekudzvanya uye kubata iyo bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi bhatani pamwechete masekondi akati wandei kusvika iwe waona logo yeApple ichioneka pachiratidziro.
Kuti ugadzirise zvakaoma iPhone 8 kana modhi nyowani, pinda uye buritsa vhoriyamu kumusoro bhatani, pinda uye buritsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya uye bata bhatani repadivi kusvikira iyo skrini yasviba uye iyo Apple logo inoonekwa pakati pechiratidziro.
A rakaoma Reset pakarepo anomisa zvose negadziriro pezvakaitwa musi iPhone wako uye unokwanisa kukonzera software software. Kazhinji hazviite, asi ipfungwa yakanaka kuzviita ita chete zvakaoma reset kana iwe kudiwa ku .
sei is instagram yangu isinga shande
Yangu iPhone Kubata Screen Asiri Isiri Kushanda!
Iko yako iPhone yekubata skrini iri kukupa iwe matambudziko? Inogona kunge iri nguva yekuedza kudzoreredza yako iPhone kune ayo ekutanga magadziriso. Usati waita izvi, ita shuwa negadziriro yeparutivi iPhone wako . Iwe unogona kuita izvi nekubaya yako iPhone mukombuta uye kumhanya iTunes (maPC nemaMac anomhanya Mojave 10.14), Tsvaga (Macs anomhanya Catalina 10.15), kana uchishandisa iCloud .
Ini ndinokurudzira kuita DFU (Default Firmware Gadziridza) kudzoreredza. Mhando iyi yekudzoreredza yakati rebei kupfuura yechinyakare kudzoreredza iPhone. Kuti uite izvi, iwe uchazoda yako iPhone, tambo yekuiisa mukati mekombuta, uye yazvino vhezheni yeTunes.
Kuisa yako iPhone muDFU modhi kunogona kuve kunonyengera zvishoma. Kune yakapusa nhanho-nhanho kufamba, tarisa chinyorwa chedu chinotsanangura chaizvo maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi . Kana wapedza, dzoka kuno.
Kana Yako Kubata Screen Screen Hardware Iri Kukanganisa
Kana iwe wadonhedza yako iPhone nguva pfupi yadarika, iwe unogona kunge wakanganisa iyo skrini. Chiratidziro chakatsemuka ndechimwe chezviratidzo zviri pachena zvechiso chakakanganiswa uye chinogona kukonzera mhando dzese dzenyaya pamwe neyekubata skrini.
Kudonha kunogona zvakare kusunungura kana kukuvadza zvakapfava pasi-zvidimbu zveyako iPhone inobata skrini. Izvo zvaunoona nekuisa maoko ako pachiri chinongova chikamu chimwe chete chekubata skrini. Pasi, pane LCD skrini inogadzira mifananidzo yaunoona. Kune zvekare chinhu chinonzi digitizer . Iyo digitizer ndiyo chikamu cheiyo iPhone iyo inonzwa kubata kwako.
Iyo LCD skrini uye digitizer ese ari maviri anobatanidza kune yako iPhone's logic board - ndiyo komputa inoita kuti yako iPhone ishande. Kudonhedza yako iPhone kunogona kusunungura tambo dzinobatanidza iyo LCD skrini uye digitizer kune iyo logic board. Kubatana kwakasununguka kunogona kuita kuti yako iPhone yekubata chidzitiro imire kushanda.
Kana iPhones ikadonha, tambo diki dzinobatanidza kune yako iPhone's logic board inogona kudzimwa zvakwana chete kuti iyo yekubata skrini irege kushanda, kunyangwe kana pasina kukuvara kwemuviri. Yakareba, asi iwe Chivabvu kukwanisa kugadzirisa yako iPhone yekubata skrini nekutsikirira pasi pachikamu chekuratidzira uko tambo dzinobatana kune logic board.
Yambiro: Chenjera! Kana iwe ukatsikitsira pasi zvakanyanya, unogona kutsemura iyo iratidziro - asi iyi inogona kunge iri imwe yeaya 'hapana chakasara kurasikirwa' mamiriro, uye iyo has aindishandira kare.
Sarudzo dzeKugadzirisa Yakaputsika iPhone Kubata Screen
Kana yako iPhone yekubata isiri kushanda nekuti yakaputsika chose, iwe aigona odha kit uye edza kuchinjanisa zvikamu zvacho pachako, asi Ini handikurudzire . Kana chimwe chinhu chikatadza uye iwe wakatsiva chero chikamu chei iPhone yako nechisina Apple chikamu, iyo Genius Bar haizotombo tarisa kune yako iPhone - iwe unenge uri pachirauro che brand brand iPhone pamutengo wakazara wekutengesa.
Iyo Genius Bar inoita basa rakakura nemeso akaputsika, asi ivo vanobhadharisa premium yebasa ravo. Ita shuwa ku ronga musangano kutanga kana iwe ukafunga kushanyira Apple Store.
Kana iwe uchida kuchengetedza imwe mari, ini ndinokurudzira zvemhando yepamusoro-yechitatu-mapato ekugadzirisa masevhisi senge Pulse kana uchida kuchengetedza imwe mari. Puls ichauya kwauri uye igadzirise yako iPhone mune mashoma semaminitsi makumi matatu newaranti yeupenyu, zvese nemari shoma pane Apple.
Kana zvidimbu zvakakanganisika zvatsiviwa, yako iPhone yekubata skrini inofanira kushanda senge nyowani. Kana ikasaiti, software ingangove ine mhosva.
iphone 7 plus kwete kuchaja
Kutenga iPhone nyowani imwe sarudzo yakanaka. Kugadziriswa kwescreen kwavo pachavo hazviite zvakare zvinodhura. Nekudaro, kana akawanda macomputer akatsemuka pawakadonhedza yako iPhone, ivo vese vanofanirwa kuchinjwa. Kugadziriswa kwako kuri nyore kwescreen kunogona kuchinja kuita chimwe chinhu chinodhura zvakanyanya. Kuisa mari iyo mu smartphone nyowani inogona kunge iri mhinduro inodhura. Tarisa uone iyo UpPhone nhare yekushandisa kuenzanisa nhare dzese uye kuti dzinodhura zvakadii pane yega yega isina waya inotakura.
Yako iPhone inobata skrini ndeye yakaoma uye inonakidza chidimbu chehunyanzvi. Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kana iwe iPhone yekubata skrini isiri kushanda, uye ndingafarire kuziva mhinduro yakashanda iwe muchikamu chemashoko pazasi.